डर हटाई प्रेरणामा वृद्धि गर्नुहोस् | Yopoho Directory
जीवनलाई अझ सुखद बनाउन वा सफलता पाउनका लागि आफू भित्रको डर भगाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । जसबाट जीवन सकारात्मक तरिकाले जिउन सकियोस् । डराएर बाच्ने व्यक्ति दिनहुँ मर्ने गर्छ र जीवनको आनन्द लिएर बाँच्ने व्यक्तिले दिनहुँ एउटा नयाँ जीवन पाउने गर्छ । जीवनमा समस्या देखि डराउनु हुँदैन किनकि हरेक कुराको समाधान हुन्छ र आज नभए भोलि हुन्छ । त्यसैले जीवनमा कसरी डर हटाउने र प्रेरणा प्राप्त गर्ने निम्न कुराहरु जानी राखौ ।
असफलताको जिम्मेवार तपाई आफै
हुन सक्छ तपाईँको ठुलो शत्रु तपाईँ आफै हुनुहुन्छ । आत्म विजय पहिलो र सर्वश्रेष्ठ विजय हो । आफ्नै मनलाई पनि बुझाउन सिक्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो सबै महत्वपूर्ण लडाई आफू भित्रै लडीरहेको हुन्छ । प्रायः स्थितिलाई होइन बरु आफैलाई परिवर्तन गर्ने आवश्यकता हुन्छ । मात्र तपाइको डरले तपाइलाई रोकेको हुन्छ र सफलताबाट विमुख गरेको हुन्छ । जब तपाइ स्वयम् आफ्नो सफलताको बाटोमा बाधा भई उभिनुहुन्छ, त्यसबेला तपाइको आशाहरु सधैँ अस्पष्ट हुन्छन् र तपाइको डर स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो मनभित्रको डर हटाउनुहोस, आफ्नो गुणको बारेमा सोच्नुहोस् र सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुहोस् ।
बितेको दिन नसम्झिनुहोस्
यदि हामीले विचार गर्ने हो भने ज्ञात हुन जान्छ कि नकारात्मक भावनाहरु प्रायः अतितका कारण उत्पन्न हुने गर्छन् । त्यसैले आफ्नो अतीतलाई वर्तमानमा हाबी हुन नदिनुहोस् र वर्तमानको अनुभव नष्ट गर्न नदिनुहोस् । अतीतलाई बिर्सिनुहोस् । यदि अतीत बिर्सिनु हुन्न भने तपाइको भविष्य दुःखद हुनेछ ।
आप्mनो लागि समय निकाल्नुहोस्
हामी दैनिक काममा व्यस्त हुने गर्छौ । जसले गर्दा हामी आफ्नो लागि सोच्ने र त्यसमा अमल गर्ने कुरामा विचार नै गर्दैनौ । यसले गर्दा हामी निकै थकान महसुस गर्ने गर्छौ । त्यसैले आफ्नो लागि पनि केही समय निकाल्नु पर्छ । यसबाट जीवनको गुणहरुमा विकास हुँदै जानेछ ।
छोटो जीवन, धेरै जिम्मेवारी
भनिन्छ, जीवन क्षणिक हुन्छ तर यस कुराको भित्री मर्मलाई बुझ्नु पर्छ । हाम्रो जन्म देखि लिएर अहिलेसम्म केही पनि स्थायी छैन । त्यसैले समयको महत्व बुझी मेरो जीवनको उद्धेश्य के हो ? भन्ने कुरामा विचार पु¥याऔ । तब मात्र हाम्रो दायित्व बोध हुनेछ र हामी जागरुक बन्नेछौ । अनि मात्र हामी जीवनको प्रत्येक क्षणलाई उद्धेश्यपूर्ण तरिकाले जिउनेछौ ।
सेवाबाट शान्ति मिल्छ
कुनै परिणामको आशा नगरी आफ्नो जीवनमा दयालुताको भावना राखी काम गरौँ । सेवाले नै जीवनमा शान्ति ल्याउँछ । जब तपाइ कसैको मद्धत गरी उसको जीवनमा सुख ल्याउनुहुन्छ तब त्यसको तरङ्गले तपाईँलाई पनि आकर्षित गर्नेछ ।
मुस्कान महँगो छैन
हरेक दिन बिहान आफूलाई ऐनामा हेरी मुस्कानले स्वागत गर्नुहोस् । आफै सित एउटा बाचा गर्नुहोस् कि कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्नो ओठबाट मुस्कान हटाउनु हुने छैन । आफ्नो मुस्कानलाई सस्तो र रिसलाई महँगो बनाउनु होस् । यसो गर्नाले जीवन सरल र शान्त हुनेछ ।
जीवन एउटा कक्षा कोठा हो, सबै जना शिक्षक हुन् र हामी विद्यार्थी हौ । कहिल्यै पनि कुनै व्यक्तिलाई कम स्तरको सम्झिने गल्ती गर्नुहुँदैन । ज्ञान जहिले पनि जसले पनि दिन सक्छ । हरेक स्थितिमा र हरेक व्यक्तिले हामीलाई जीवनमा केही न केही नयाँ अवश्य सिकाउँछ । यो सम्पूर्ण संसार हाम्रो शिक्षक हो । जब तपाइ सधैँ सिक्न तयार रहनु हुनेछ तब अरुलाई आफू भन्दा कम स्तरको भनेर सम्झिन छोड्नु
हुनेछ । तब मात्र जीवनमा विनम्रताको उदय हुनेछ ।
मानिसको प्रेम र विश्वास निकै गाढा हुनुपर्छ । यसले नै मानिसलाई कृतज्ञ बनाउँछ । आफू माथिको विश्वासको भावनाले नै असफलता र कठिन समयमा तपाइको मद्धत गर्नेछ ।
Previous: काठमाडौँ महानगरकाभित्रका सबै विद्यालयमा एकै प्रकारको पोशाक लागू गर्ने तयारी
Next: के अरुको सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ? (सौन्दर्य)